Kaalmo dhaqaale oo ku saabsan dib u dejin - Migrationsverket
Kaalmo dhaqaale oo ku saabsan dib u dejinta markaad wadankaaga joogto
Stöd till återetablering i hemlandet – somaliska
Haddii adiga diidmo lagaa siiyey codsigaagii ku saabsanaa magangelyodoonka oo aad wadankaagii u noqonaysid waxaad markaa kaalmo dhaqaale ka heleysaa Hey’adda laanta socdaalka. Waxaad codsankartaa kaalmo dhaqaale, waxaad kaloo heleysaa caawimo sidii aad bulshada aad dib ugu soo laabatay u dhexgeli lahayd, adigoo ku dhexgelaya kaalmada dhaqaale dib u dejinta.
Kaalmada dhaqaale ee ku saabsan dib u dejinta
Kaalmada dhaqaale waxa la siinayaa qofka ku laabanaya wadankiisii halkaas oo shuruudaha inuu qofku dib u degaa ay tahay mid xadidan sababtuna ay tahay iskhilaafyada halkaa taagan ee adag awgeed.
Wakhtigan xaadirka ah waxay Hey’adda laanta socdaalku qiimaysay in dadka ku laabanaya wadamadan soo socda la siinayo kaalmo dhaqaale oo ku saabsan dib u dejin:
Halkan ka akhriso warbixin intaa ka badan oo ku saabsan kaalmada dhaqaale iyo sida aad adigu u codsanaysid
Kaalmo khuseeysa sidii aad u dhexgelilahayd wadankaaga
Waxaa adiga lagaa caawinayaa sidii aad dib ugu dhexgelilahayd bulshada wadankaaga ku dhaqan, waxaanad heleysaa caawimada isdhexgalka markaad dib wadankaaga ugu laabatid. Caawimadaa waxa loo soo bandhigayaa qofka dib ugu laabanaya wadankiisii qofkaas oo u baahan sidii uu suuqa dhaqada ula qabsan lahaa ama haddii uu u baahdo talabixin dhinaca sharciyada.
Caawimadaa waxa wakhtigan xaadirka ah loo soo bandhigayaa qofka ku laabanaya wadamadan soo socda:
Afghanistan, Irak (Kurdistan), Irak (bartahama iyo koonfur), Marocko, Pakistan, Ryssland.
Halkan ka akhriso warbixin intaa ka badan oo ku saabsan kaalmada dhaqaale iyo sida aad adigu u codsanaysid (oo af ingiriis)